St George's, University of London - Kudzidza ari United Kingom
inotangwa : 1733
Musakanganwa kuti kurukura St George, University of London
Kunyoresa pana St George, University of London
Isu KUDADA nekuzvitaurira kupa yakanakisisa chiitiko kwedu vadzidzi – kuvaka pamusoro 250 makore utsanzi uye kufambirana utano nematambudziko dzinochinja NHS. Kuzvitsaurira kwedu kuna vadzidzi, tsvimbo uye alumni yakavakirwa pamusoro kuzvipira tinogovana navo kunatsiridza uye mberi utano.
Tinodada kusiyana-siyana kwedu, kupa vadzidzi vaibva siyana siyana mukana kushanda uye kudzidza uri utano kembasi tichiratidza zvizere siyana zveutano ounyanzvi hwokugadzira.
St George, University of London ari kuyunivhesiti muUK chete yakatsaurirwa kuna zvokurapa uye rezvoutano dzidzo, nokudzidziswa uye tsvakurudzo. runonakidza kwedu kwakavakirwa yedu zvakakwana ritaure utano zvesayenzi uye mushonga uye tinoedza kuunza nzira itsva uye pakubatsirana yokusvika zvose zvatinoita.
Tiri kupa nyika-kirasi multi-nyanzvi utano sayenzi dzidzo kuti chinoshongedzera kudzidza kwedu kusangana ano zveutano zvinodiwa kuburikidza akakodzera kuongorora kwesayenzi, zvekuchipatara umbirimi, simba interpersonal unyanzvi uye chikwata-anotsanangura vanoshanda. Kugovana chiremba mamiriro ane huru London dzidziso chipatara, yedu yemazuva nzira dzidzo kunoguma zvakanaka wakatenderedzwa, zvikuru nenyanzvi vanachiremba, masayendisiti, uye utano uye nemagariro kutarisirwa nyanzvi.
Nesuwo dzinoshanda pamwe zveutano vanopa kumarudzi rwezasi London kuti nechokwadi kuti kosi edu zvinoratidza azvino kurapwa tsika uye kuti vatinodzidza navo vanobatsirwa siyana zvekuchipatara kupinda muzvikoro mikana. Upfumi kurapwa ruzivo anowanikwa ndechimwe zvikonzero nei mberi St George kuti kuva akakurumbira kudaro vadzidzi.
The rorusununguko Health, Social Care uye Dzidzo kuti isu kumhanya achidyidzana pamwe Kingston University anodzidzisa kosi kusanganisira ukoti, kusununguka, radiography, Man playing sainzi, physiotherapy uye basa evanhu.
zvirongwa zvedu zviri zvakaoma asi isu kuzvikudza pachedu nokutsigirwa pachedu isu zvinopa vatinodzidza navo, nechokwadi vanova vokutanga-mwero vanachiremba uye masayendisiti, netsoka dzavo zvakasimba pasi. Tinotenda vose vanofanira kukwanisa kuwana zvakanakira anorapa achishandisa mitemo yakawanikwa uye kuti kutsvakurudza kuva chinokosha mukurovedza nedzidzo zveutano nenyanzvi.
Tine zvakawanda kupfuura 250 makore changamire uye utsanzi pakutsvakurudza uye dzidzo zvichiguma groundbreaking mberi mukurapa uye utano. alumni edu zvinosanganisira Edward Jenner, John Hunter, Muriel Powell uye Patrick Steptoe. tsvakurudzo Kudya vedu vatatu nezvekufirwa anorapa achishandisa mitemo uye zvesayenzi kuwanikidza, chaanotizivisa kudzivirirwa uye kurapwa zvirwere muminda yevanhu utano, mwoyo chirwere uye chirwere – vatatu mukuru matambudziko noutano pose 21there zana remakore.
Tiri vakazvipira kuva pachena kunzwisisa uye munyaya yedu mapurogiramu pakutsvakurudza uye aishingaira pave kudyidzana mhiri London, unobatanidza vadzidzi nevaongorori kune vanoita uye vashandirwi mhiri nharaunda.
chinangwa chedu ndechokuti kutanga vanhu kusangana ano zveutano zvinodiwa uye matambudziko mangwana zveutano uye isu noushamwari vadzidzi dzinotenda tsika dzedu, simba uye vavariro.
Healthcare Science (vasiri Sciences)
Kusununguka / akanyoreswa Nyamukuta nokuda vakanyoresa vanamukoti
Kusununguka / vakanyoresa Nyamukuta
Man playing Practice
Man playing Science
Tine refu, nerakakurumbira nhoroondo kudzidzisa vanachiremba, kufambidzana shure kupfuura 250 makore. Pakati alumni vedu tinogona kuverenga mamwe dzakavamba dzamadzibaba mushonga. Tiri ichinyatsozivikanwa yedu yemazuva ekuumba dzidzo uye kudzidza dzedu kunyatsogadzirira nemarwadzo uye mibayiro rakaoma uye kuchinja basa.
1733 St George Chipatara anovhura pana Lanesborough House pana Hyde Park Corner. The Hospital itsva hwakarongwa pamusoro uriri matatu uye rinokwana 30 Varwere vari kumawadhi maviri, rimwe varume rimwe vakadzi.
1751 Formal kunyoresa mudzidziri webasa vanachiremba anotanga.
1754 The chiremba yokufeva John Hunter anotanga kuitwa mapoka yokudzidza St George.
1796 Edward Jenner (mudzidzi kubva 1770 kuti 1774) zvinobudirira anoita wokutanga kubaya pamusoro chibhokisi, zvichiita kuti vanozokunda wakakwana yokupedza nayo chirwere 1980. Nedebwe pamusoro Blossom, mhou yaishandiswa Jenner kuti chibhokisi chiedzwa, akaunzirwa St George, University of London nomwanakomana Jenner muna 1857, uye akaramba ari yunivhesiti wacho nhaka kubva.
1800 Tiine Lanesborough House chivakwa kuwira yakapararawo, makwikwi akasungwa kugadzira itsva 350-mubhedha muchipatara chivakwa. Izvi akahwina naWilliam Wilkins, ane Chirungu mapurani ane yakakurumbira basa ndiye National Gallery.
1844 Benjamin Brodie, chiremba pana St George Chipatara, anogadzwa seyokutanga Mutungamiri Royal College of vanachiremba. Brodie vaizoendawo mberi kuti vakagadza President yokutanga General Medical Council muna 1858.
1858 Gray Anatomy, zvibereko pamwe pakati Henry Gray uye demonstrator kuripo Henry Vandyke Carter, mumwe mukuru unyanzvi uye zvesayenzi nokubudirira inobudiswa.
1867 Mr Atkinson Morley anosiya mari yake St George Chipatara pakuvaka uye dzigadziridzwe ane convalescent musha kure kubva ruzha uye kupararira nechepakati London.
1895 Patrick Manson anogadzwa mudzidzisi muna Tropical Medicine uye anopa yokutanga narinhi munhevedzano hurukuro pamusoro Tropical zvirwere pana St George. Manson akapfuurira inowanikwa London School noutsanana uye Tropical Medicine 1899.
1899 Edward Wilson anokodzera pana St George Chipatara Medical School. On zvinodiwa iye akumbira kubatana Captain Scott wokutanga Antarctic rwendo, achisiya England mu 1901 sezvo mudiki chiremba uye wemhuka. mu 1910 iye inobatanawo achirwara-fated rwendo inotungamirwa Scott kuti South Pole uye inoparara nedzimwe nhengo dzebato iri pavakadzoka kubva South Pole.
1915 St George ndicho yunivhesiti yokutanga muLondon kubvuma vadzidzi hadzi muHondo Yenyika One. Helen Inglby, mumwe wevakadzi vana vakabvuma pamwe Ethelberta Claremont, Marian M. Bostock uye Elizabeth O'Flynn, anoenderera mberi kuva Pathologist of Albert Einstein Medical Centre muPhiladelphia muna1945.
1939-1945 Panguva Second yeHondo Yenyika St George inova Unit Emergency Hospital Service, kugovera 200 Mibhedha nokuti muhondo uye 65 Mibhedha nokuti rehurumende vanorwara.
1948 The NHS anopinda ari 5 Chikunguru 1948 kugovera zveutano zvose zvenyika, kwakavakirwa vanoda, kwete kugona kubhadhara.
1954 Aubrey Leatham anogadzwa sezvo St George wokutanga Consulting cardiologist. Leatham yakanakisisa kuzivikanwa kuti afunge itsva uye nani shanduro stethoscope, uye kuumba endocardial cardiac pacemaker kutanga kwenyika.
1958 Wokutanga Kugara kweMweya pacemaker oparesheni rinoitwa pana St George.
1973 Building inotanga musi St George kuti nzvimbo itsva pana Tooting, London.
1976 The danho rokutanga Medical School chinotanga vari Tooting pamwe 80 vadzidzi.
1978 Pioneer kushaya mbereko Patrick Steptoe, (alumnus, MBBS 1939), ndiye, pamwe zvipenyu uye physiologist Robert Edwards, pakuumba ezvokunambira kunze kwomuviri waamai muchangosangana (IVF), inotisvitsa kuberekwa wokutanga kunambirwa mwana mu 1978.
1980 St George pana Hyde Park inovharwa chokupedzisira nguva uye HM Queen Elizabeth II chinotanga panguva Tooting hutsva St George Chipatara uye Medical School 6 Mbudzi 1980.
1995 The rorusununguko Health uye Social Sciences, Joint kutsigirana pakati SGUL uye Kingston University chinosimbiswa, kupa utano uye munzanga kutarisira dzidzo munyika roukoti, kusununguka dzidzo uye radiography.
2000 St George ndiye wokutanga UK urongwa kuti uve nokuparura MBBS Graduate Entry Programme (GEP), mana gore Fast njanji yezvokurapa dhigirii kosi dzingashandwa kudzidza chero nechirango.
2008 50 Makore pashure yokutanga pacemaker oparesheni yakaitwa pana St George Chipatara, ari 50,000th oparesheni chiri zvinobudirira anoitwa panguva Hospital.
2011 The Boka vadzidzi vezvokurapa rokutanga enrols akapedza mushonga chirongwa paUniversity kuNicosia, Saipurasi.
2013 The Dzebasa Dzevakawana Dhigirii Diploma Physician Sangana Studies Teaching Team anokunda wokutanga nokusingaperi Tariro Dzebasa Dzevakawana Dhigirii Award nokuda Best Teaching Team (sainzi, Technology uye Engineering).
2014 HRH Princess Anne anovhura ICHIVA ST yaGeorge, yemarudzi mudzidzi centre muLondon.
2014 Research rinoitwa Population Health Institute pamusoro Migumisiro kwevabereki kusvuta pamusoro zvokufema utano pakati pavana kunoguma Westminster Bill kuti irambidze yokusvuta motokari kana vana varipo.
Unoda kurukura St George, University of London ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
St George, University of London musi Map
Photos: St George, University of London pamutemo Facebook
St George, University of London wongororo
Join kukurukura pamusoro St George, University of London.
University of zimbabwe Colchester